Mwepụ mkpuchi mkpuchi mkpuchi maka iwepu agba site na sistemụ kpo oku
Mwepụ mkpuchi mkpuchi maka iwepu agba
Mwepụ mkpuchi mkpuchi ụkpụrụ
Ihe ntinye ihe na-aru oru site na iwu nke itinye n'ọkwa. A na-eme ka ọkụ dị na nchara nchara ma jikọtara njikọta. A na-ewepu mkpuchi ahụ kpamkpam na-enweghị disintegrating na kpamkpam site na ndị na-emerụ emerụ, ya bụ mgbasa ozi gbawara. Nke a doro anya na-eme ka mkpofu na imegharị ihe mkpofu dị mfe ma dị ọnụ ala karịa. Ọbụna n'ime olulu na mgbawa n'elu ala a na-etinye disbond.
Igwe ọkụ HLQ na-arụ ọrụ site na ịnyefe ike ngwa ngwa na nchara nchara, n'ihi nke a na-echekwa ikpo ọkụ nke elu na iwepụ ngwa ngwa nke ọtụtụ ụdị mkpuchi.
Kedu ihe mkpuchi mkpuchi?
HLQ Usoro iwepụ mkpuchi mkpuchi bụ ihe eji arụ ọrụ ọgbara ọhụrụ na-eme ka agba na agba agba ngwa ngwa. Ọ bụ ụzọ dị ngwa, nke dị ọcha ma dị nchebe iji wepụ ihe mkpuchi.
Ugbo oku nwere ike karie ụzọ ndị na-agba agba agba. Abrasing ọgbụgba ọkụ ma ọ bụ disk egweri bụ n'ozuzu ọzọ ọrụ kpụ ọkụ n'ọnụ na-abịa na ndị ọzọ mbipụta dị ka ndị na-eri nke Herọd ma ọ bụ containment na nchịkọta nke gbawara media, tinyere filtration ma ọ bụ nkewa nke mkpuchi ihe maka mkpofu. N'ọtụtụ ọrụ obodo ndị a, a na-echebara ha echiche ma na-efu oke ego. Ebe, mgbe ewepụ mkpuchi mkpuchi site na itinye n'ọkwa, naanị ihe mkpofu bụ mkpuchi onwe ya nke n'ọtụtụ ọnọdụ enwere ike zachapụ ma ọ bụ nwee oghere dị ka ihe mkpofu ọ bụla ọzọ.
Nchekwa -arụ ọrụ gburugburu ebe obibi: Igwe a na-achịkwa, nke metụtara mpaghara na-ebute oke anwụrụ ọkụ na uzuzu na-egbu egbu.
Easy hichapụ: Ihe mkpuchi ihe bu otutu napu onwe ya na flakes karia igweri ya.
Enweghị mkpọtụ ọrụ: Ndị na-arụ ọrụ nwere ike ịrụ ọrụ na mpaghara ọha na-enweghị nsogbu.
mobile: Akụrụngwa ahụ bụ ihe siri ike ma nwee ntụkwasị obi mana ọ ka dị arọ ma dịkwa mfe ịgagharị na ebe ọrụ.
Belata ike oriri: Ọsọ ọsọ, ziri ezi na ikwughachi nnyefe ọkụ na-eme ka mkpuchi mwepụ usoro dị oke ike arụmọrụ.
Usoro mgbanwe: Abù kpo oku, ịgụ isiokwu, freehand na ọkara akpaka.
Enweghị ikike: Enwere ike iji usoro a mee ihe na mbara ala, gburugburu gburugburu, n'ime / n'èzí n'akụkụ, akụkụ abụọ nke mkpụrụ, gburugburu rivets, wdg.
A na-eji mwepu mkpuchi ihe mmịnye n'ọtụtụ ụlọ ọrụ, dịka ụgbọ mmiri / mmiri, ụlọ, tankị nchekwa, pipeline, àkwà mmiri na ime mmiri.
ihe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-agụnye iji ụzọ ọzọ dị ugbu a na ihe ntinye na-emepụta ọkụ eletrik. Mgbe ejiri ya rụọ ọrụ nke ọma, ubi a na - eme ka okpomoku dị n'okpuru mkpuchi na mkpụrụ nchara, na - ebute mkpuchi de-bonding ngwa ngwa na ngwa ngwa site na igwe.
Na Alliance, anyị na-eji usoro a ewepu ihe mkpuchi site na nchara dịka:
Otutu mkpuchi tinyere epoxies, urethanes na ndi ozo
Ihe mkpuchi ọkụ (PFPs)
Roba na-acha uhie uhie na nke vulcanized yana rọba chlorinated
Itinye n'ọkwa mkpuchi mwepụ Na Nchekwa tankị -
The Sistem kụrụ ọkụ n'ihi na mkpuchi mwepụ dị mma maka ngwa ngwa na ịrụ ọrụ nke ọma nke nnukwu ebe ma ọ bụ maka nyocha nke oghere weld na tankị nchekwa. Ahụmahụ sitere na ọrụ na ala ala egosiwo na nnukwu iko-fiber (5-6 mm) nwere ike wepu ya na ọnụọgụ ọnya ruo 10-12 m2 / hr. mgbe thinner omenala sere usoro nwere ike wepụrụ na ọnụego ruo 35 m2 / hr.
Ọbụghị naanị na sistemu nke Induction na-eweta nnukwu elele akụ na ụba dị ka ọnụọgụ ọnụọgụ dị elu na mkpofu mkpofu pere mpe, mana ọ na-enyekwa aka gburugburu ebe obibi - yana ọrụ ndị ọrụ mmekọrịta.
Itinye n'ọkwa mkpuchi na mwepụ na ọkpọkọ -
Usoro ikike ikpo oku nke HLQ nke a na-ahụ maka iwepu ihe mkpuchi gosipụtara na ọ dị oke irè na ọkpọkọ na ọrụ pipeline na ụwa. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma na nchekwa na-ewepu mkpuchi dị ka Coal Tar, Ebonite, 3LPE / 3LPP, roba na eriri ndị ọzọ siri ike nke nwere oke ruru 30 mm.
Mkpuchi mkpuchi na HLQ Teknụzụ dị oke ọnụ ma ọ naghị ewepụta mmiri ma ọ bụ mkpofu mmiri ọzọ, na-enye nnukwu ikike maka nchekwa na njikwa arụ ọrụ, ọkachasị na mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ. A na-ewepụ ihe mkpuchi ahụ n'ụzọ dị mfe na ibe ma ọ bụ iberibe dị mfe itinye na akpa mkpofu ikpofu na-enweghị ihe egwu nke mmetọ ikuku, ala ma ọ bụ mmiri.
Ebe dị anya site na ngalaba bụ ihe ruru 100m nke na-enye ohere ime mgbanwe na ịrụ ọrụ nke ọma. HLQ emepụtawo ihe ngwọta nke na-ewepụ ihe ize ndụ nke ikpo oke ọkụ mgbe ị na-eji usoro ntinye na ígwè. Nke a abụrụla ihe dị mkpa na usoro nke ịnweta nnata nkwenye maka iji ya na mmanụ dị ndụ na gas.
Categories 未未 Tags mwepụ mkpuchi, mkpuchi mwepu mkpuchi, mkpuchi mwepụ na pipeline, mkpuchi mwepụ na nchara, mkpuchi mwepu na tankị, induction mkpuchi kpo oku, mwepụ mkpuchi mkpuchi, ntinye mwepu mkpuchi nkpuchi, induction agba mwepụ, induction agba mwepụ okpomọkụ, agba mwepụ Mail igodo
itinye n'ọkwa mmiri ọkụ na usoro izizi